Kulan ujeedkiisu ahaa u aargudida Bin Ladin oo ka dhacay degmada Afgooye (Sawiro) – SBC
Kulan ujeedkiisu ahaa u aargudida Bin Ladin oo ka dhacay degmada Afgooye (Sawiro)
Wararka ka imaanaya degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha hoose ayaa sheegaya in maanta kulan balaaran ka dhacay halkaasi oo ay ka qayb galeen Sheekh Xasan Daahir Aweys, Sheikh Muqtaar Roobow (Abuu Mansuur), Sheekh Mansuur Al Amriiki oo ah nin u dhashay wadanka Mareykanka oo ka tirsan xarakada Al-Shabaab & xubno kale oo ka mid ah ururkaasi laga soo saarey hanjabaad cusub oo la xiriirta u aargudidda hogaamiyihii shabakada Al-Qaacida Cusama Bin Ladin oo ay Mareykanku ku dileen wadanka Pakistaan. Kulankan oo ay soo abaabuleen xarakada Al-Shabaab ayaa looga hadlayey dhimashadii Cusmaan Bin Ladin, waxaana xubnihii ka qayb galey waxay ku muujiyeen sida ay uga go’an tahay inay u aaraan Cusaama Bin Ladin, waxaana ay sheegeen in uu sii socon doono dagaalka ay kula jiraan Mareykanka iyo xulufadiisa. Qaar ka mid ah ganacsatada, culuma’udiinka, odayaasha dhaqanka & dadweynaha magaalada Afgooye ayaa kulankaasi ka qayb galey, waxaana amaankiisa sugayey xoogag ka tirsan Shabaabka, iyadoo goobta shirku ka dhacay ay surnaayeen calanka xoogaag Al-Shabaab. Sheekh Xasan Daahir Aweys oo kulankaasi ka hadley ayaa sheegay in Cusaama Bin Ladin uu qayb weyn ka qaatey dagaalka Soomaaliya & waliba dagaalada u dhaxeeya Islaamka & reer Galbeedka, waxaana ay sheegeen in uu ahaa nin aad uga warqabay Soomaaliya.
Sheekh Mansuur Al Amriiki oo ah hogaamiye u dhashay dalka Maraykanka kana mid ah hogaamiyaasha xarakada Al- Shabaab oo kulankaasi ka haldey aayaa sheegay in sii socon doonaan dagaalada wuxuu xusey in ay u aari doonaan Cusama Bin Ladin. “Obama & Mareykanku waxay ku fashilmeen siyaasada aduunka, dilka Sheekh Cusaama ma noqon doono mid wax u dhima dagaalyahanada caalamka ee la dagaalamaya Mareykanka & reer Galbeedka, waxaana inaga go’an inaan u aargudno Sheekh Cusaama” Sheekh Mansuur Al Amriiki.
Sheekh Mukhtaar Roobow (Abuu Mansuur) ayaa isaguna wuxuu kulankaasi ka sheegay in Sheekh Cusaama Bin Ladin uu kaalin muhiim ah ka qaatey dagaalada xarakada Al-Shabaab kaga soo horjeedaan dawlada KMG ah ee Soomaaliya & ciidamada AMISOM, wuxuuna muujiyey inay ka go’an tahay inay u aargudaan wax is badal ahna aanu ku imaan doonin dagaalka ay wadaan. Kulankaasi waxaa sidoo kale ka hadley Sheekh Fu’aad Maxamed Khalaf (Shangole) oo isaguna ka mid ahaa saraakiishii kulankaasi ka hadashay ayaa isaguna wuxuu ka hadley arimahaasi wuxuuna muujiyey hanjabaad culus oo la mid ah tan ay jeediyeyeen xubnaha kale ee kulankaasi ka qayb galey.
aad ayan ugu farxsanahy shirkana waan soo dhawaynaynaa